यदि तपाईं युरोपको पहिलो यात्राको योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तपाईलाई सबैभन्दा बढि जान्नु आवश्यक छ सुन्दर शहर संसारमा. हामीले सही गाईड डिजाइन गरेका छौं 10 यात्रा गल्तीहरू तपाईंले युरोपमा टाढा रहनु पर्छ. महलहरूको भूमिमा यात्रा, अति उत्तम खाना, राष्ट्रिय निकुञ्जहरू, र रमणीय गाउँहरु, तपाईंसँग भएको सबैभन्दा अविस्मरणीय बिदा हुन सक्छ. यसको विपरितमा, यो पनि एक दुष्ट कथा मा परिणत हुन सक्छ र एक खराब अन्त हुन सक्छ, यदि तपाईं राम्रोसँग तयार हुनुहुन्न भने.
पहिलो कुरा जुन तपाईं सुन्नुहुन्छ दिमागमा आउँछ सार्वजनिक यातायात, भीड र तातो बसहरू छन्, लामहरु, र ट्राफिक. तथापि, युरोपमा सार्वजनिक यातायात केवल बस मात्र ट्राम र रेलहरू मात्र हुन्. केही पर्यटकले बरु कार भाडामा लिन्छन्, त्यसपछि कम्युट, तर युरोपमा सार्वजनिक यातायात धेरै सहज छ, समयनिष्ठ, सस्तो, र सिफारिस गरिएको.
शुल्कहरू भुक्तानी र मुद्रा विनिमय तपाईं खर्च हुनेछ, यसैले तपाईको रिसर्च अनलाइनमा गर्नु राम्रो हुन्छविनिमय पोइन्टहरू. पनि, तपाईं जहिले पनि तपाईंको होटेलको रिसेप्शनमा सोध्न सक्नुहुन्छ, उनीहरू सिफारिस गर्न खुशी हुनेछन् भरपर्दो पैसा पोइन्टहरू क्षेत्रमा. यो एयरपोर्टबाट यात्राको लागि पर्याप्त आदानप्रदान गर्न सिफारिस गरिन्छ, र पहिलो रकम कभर हुने रकम 1-2 तपाईको यात्रामा दिनहरू.
यदि तपाईं आफ्नो यात्राको अगाडि अनुसन्धान गर्न मात्र केही समय समर्पित गर्नुहुन्छ भने, तपाईं एक अविस्मरणीय पाक अनुभव को लागी आफैलाई व्यवहार गर्नुहोस्. यसबाहेक, गर्न स्वादिष्ट खाना प्रयोग गर्दै, तपाईं केहि पैसा पनि बचत गर्न सक्नुहुनेछ, यसको सट्टामा पहिले रेस्टुरेन्टमा स्पिलगर्lको सट्टा. राम्रो कफी, पेस्ट्री, स्थानीय खाना, र हास्यास्पद दरहरूमा सनसनीखेज व्यंजनहरू, केवल कुनाको वरिपरि हुन सक्छ.
युरोपेली शहरहरू आश्चर्यजनकको रूपमा चिनिन्छन्, तर पनि पिकपकेटिंग, पर्यटक जाल, र विभिन्न योजनाहरू पर्यटकहरूलाई छल गर्न. तपाईंको यात्रा बजेट बीचमा डाइभ गर्दै तपाईंको दिन-यात्रा झोला, सुरक्षित, र क्रेडिट कार्ड सुरक्षित यात्रा र आनन्द लिनको लागि उत्तम तरिका हो.
#traveleurope यूरोपटाइप्स रेल यात्रा ट्रैवलमिस्टेक्स traveltips